ရွေ့လျားနေသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
ရွေ့လျားနေသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုန်းများ
Posted by Betty on January 14, 2015 at 10:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာသာစကားတွေဟာ အမြဲတမ်း ပုံသေ ရှိမနေကြဘဲ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်ပါတယ်။ ခေတ်ကို လိုက်ပြီး စကားလုံးတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေဟာ အဟောင်းတွေ ဖြစ်သွားလိုက်၊ ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်၊ အသစ်တွေပေါ်လာလိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ဘယ်စကားက အသစ် ဘယ်စကားက အဟောင်း ဘယ်စကားကတော့ သုံးလို့ရသေးတယ်၊ ဘယ်စကားက လုံးဝသုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ။ Contemporary တွေက ဘယ်တော့ old fashion ဖြစ်လာမလဲ၊ ဘယ်တော့ out-dated ဆက်ဖြစ်သွားမလဲပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်စုံတစ်ယောက်က contemporary ထင်ပြီးသုံးနေတာကို အခြားတစ်ယောက်က old fashion လို့ ထင်တာ ကြုံဖူးကြားဖူး ကြမှာပါ။
Slang and idiom
စကားတွေထဲမှာ old fashion ဖြစ်သလား၊ out-dated ဖြစ်သလား ခွဲလို့ အလွယ်ဆုံးကတော့ slang နှင့် idiom တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်အလိုက် ပေါ်လာတဲ့ စကားတွေဖြစ်လို့ date stamp လုပ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ခေတ်မှီသေးလား ခေတ်အောက်သွားပြီလား သိရလွယ်ပါတယ်။ ခေတ်အောက်နေတဲ့ slang တွေ idiom တွေကို သုံးနေရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တွေကို တစ်ဖက်လူက အလွယ်တစ်ကူ ခန့်မှန်းနိုင်သွားမှာစိုးလို့ (TV တို့ internet တို့ကနေ တွေ့ရ ကြားရတဲ့ ) ပိုပြီး သစ်တဲ့၊ ပိုပြီး contemporary ဖြစ်တဲ့ expression တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်သုံးစွဲဖို့ အစဉ်ကြိုးစား ကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ဒီခေတ်ပေါ် အသုံးအနှုန်းတွေဟာ အချိန်ကာလ တစ်ခုမှာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်သလောက် အချိန် အပြောင်းအလဲနဲ့ အတူ အရောင်လွင့် ခြောက်သွေ့သွားတဲ့ သစ်ရွက်တစ်ရွက်လို ဖြစ်သွားကြမှာကို ကျွန်တော်တို့ သိထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ‘thinking outside the box’ တို့ pushing the envelope’ တို့ကို သုံးနေပေမဲ့ နောင်နှစ်အနည်းငယ်ကျရင် သုံးချင်မှ သုံးတော့မှာနော်။
ဒါဆိုရင် grammar နဲ့ vocabulary ကရော။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်တုန်းက မိသားစုတွေ အမေ့အိမ်မှာ စုဝေးကြတုန်း ညီဖြစ်သူကို သူ့အိမ်မှာ wireless အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်သလားလို့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ ၊ အမေက ကျွန်တော့် မေးခွန်းကို ကြားပြီး ဘာဝင်ပြောသလဲဆိုတော့ ၊ မင်းတို့ အဖိုးရဲ့ wireless တုန်းကလည်း သူ့အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းမိခဲ့တာ မဟုတ်ဖူးတဲ့။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ wireless က ကျွန်တော့်ညီအိမ်က wifi network ကို ပြောနေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အမေဝင်ပြောတဲ့ wireless က အခုခေတ်မှာ radio လို့ လူတွေ သိကြတဲ့ အရာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခေါ်အဝေါ်နာမည်တူ တစ်ခုကို ခေတ်ကို လိုက်ပြီး သုံးစွဲတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုကြတာလဲ မထူးဆန်းတော့တဲ့ widespread phenomenon တစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။ စကားလုံးက မသေဘဲ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ ပစ္စည်းကို နာမည်ထပ်ပေး ခေါ်ဆို လိုက်ရုံဘဲပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း နောက်ထပ် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ version ကိုလိုက်ပြီး (အရင် ရှိပြီး နာမည်နဲ့ version ကိုလည်း မပျောက်စေလိုသောကြောင့်) အမျိုးအစား ခွဲခြားရအောင် နောက်တိုးစကားလုံးထည့်ပြီး rename လုပ်ကြတယ်။ ဥပမာ အရင်တုန်းက guitar ဆိုရင် acoustic တစ်မျိုးဘဲ ရှိခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် ဂီတာ (guitar) လို့ တစ်လုံးတည်း ခေါ်ကြတယ်။ နောက်ခေတ်ပြောင်းလာတော့ မော်ဒယ်အသစ်တွေ ထပ်ပေါ်လာတော့ လျှပ်စစ်ဂီတာ (electric guitar) ရယ်လို့ နာမည်တိုးလာတယ်။ အလားတူဘဲ TV တို့ radio တို့ မပေါ်ခင်က music ဆိုရင် live ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နာရီတွေဆိုလည်း လက်တံတွေပါတဲ့ analog တွေဘဲ ရှိခဲ့ပြီး မီးရထားဆိုတာလည်း ရေနွေးငွေ့နဲ့ မောင်းခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းဟောင်းတွေ အတွက် ယနေ့ခေတ် နာမည်သစ် new-word-for-old-thing တွေဖြစ်တဲ့ electric guitar, acoustic guitar, digital clock, live music, bullet train, steam train စတာတွေ ပေါ်လာ ကြပါတယ်။ နာမည်ဟောင်းတွေကို မွန်းမံလိုက်တာပေါ့။ အဲ့ဒီလို မွန်းမံလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို retronyms လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အခြားသော စကားလုံးတွေကတော့ အချိန်ကာလ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ မူလ အဓိပ္ပါယ်အစား၊ နောက်အစားထိုး အဓိပ္ပါယ်က နေရာယူသွား ကြပါတယ်။ ဥပမာ - ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ wireless ဥပမာ လိုမျိုးပေါ့။ ဒီလိုမျိုး စကားလုံးတွေကို historical example တွေနဲ့ meaning တွေပါ ဖေါ်ပြတဲ့ dictionary တွေ (ဥပမာ Oxford English Dictionary လိုမျိုး) မှာ ရှာဖွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယနေ့ သိထားတဲ့ စကားလုံး တော်တော်များများရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေက ခေတ်တစ်ခေတ် သို့မဟုတ် အသုံးတစ်ခုခု အတွက်လောက်သာ အပေါ်ယံ သိတာက များပြီး meaning အသစ်တွေက အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများ English စကားလုံးတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို စိတ်ဝင်စားရင် လေ့လာဖို့ website တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ www.worldwidewords.org ကို ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။ စကားလုံး အသစ်တစ်လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ရှင်းပြထားတဲ့ အဲ့ဒီ website ထဲက ကောက်နှုတ်ချက် တစ်ခုကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် New Scientist ဆိုတဲ့ သိပ္ပံ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်ထဲမှာ အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ uragnosia ဆိုတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကို Andrew Ross ဆိုသူက Alistair Beaven ဆိုသူ စာဖတ်သူ တစ်ဦးက မေးမြန်းလာသည့် “ စကားလုံး တစ်လုံးကို အပေါ်ယံ အဓိပ္ပါယ်ကိုသာသိပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်ရာ မူလ ဇစ်မြစ်ကို မသိတဲ့ သူ” ကို ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဖြေကြားရင်း ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Andrew က အာဖဂန်နစ္စတန်က ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်(computer virus) ကိုသာသိပြီး ရောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် (biological virus) ကို မသိတဲ့ ဘာသာပြန်တစ်ယောက် အကြောင်းကို ကိုးကားပြီး ဥပမာ ပေးကာ uragnosia ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စကားလုံးက origin လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ur နှင့် ignorance လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဂရိစကား agnosia ၂ လုံးကို ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ ဒါဆိုရင် uragnosia ဆိုတာက ignorance of origin ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးပေါ့။
grammar ကလည်း ခေတ်အလိုက် ပြောင်းတတ်တယ်နော်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တုန်းက ယူကေက The Honeycombs လို့ ခေါ်တဲ့ Pop အဖွဲ့ရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Have I the right to hold you? က အရမ်းပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရှိန်နဲ့ (British) English Speaker တော်တော်များများဟာ Question နဲ့ Negative တွေကို ‘do’ မပါဘဲ main verb ဖြစ်တဲ့ have နဲ့ဘဲ တိုက်ရိုက် ဖွဲ့ပြီး ပြောဆို ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အများစုက အဲ့ဒီလို မသုံးကြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ old form တွေဟာ fixed expression အချို့မှာ ဆက်လက် တည်မြဲနေကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ Question တွေ Negative တွေကို ‘do’ auxiliary သုံးပြီး ရေးသားကြပါတယ်။
I don’t have enough time for hobbies.
Do you have any idea what this means?
ဒါပေမဲ့ အချို့ phrases တွေမှာ old form တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
I haven’t the faintest idea. (လုံးဝကို မသိပါဘူး။)
Have you no shame? (ရှင်မရှက်တတ်ဘူးလား!)
၁၉၅၄ တုန်းက အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမား McCarthy ရဲ့ ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေး မိန့်ခွန်းထဲက ‘Have you got no sense of decency, sir?’ ဆိုတဲ့ စကားကလည်း လူသိများသွားပြီး အဲ့ဒီ old form က USA မှာလည်း အဲ့ဒီ ခေတ်တစ်ဝိုက်မှာ တွင်ကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာလည်း blog တစ်ခုမှာ Have you no နဲ့ အသည်းပုံ (heart symbol) ပေါင်းထားတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသေးတယ်။ Old form နဲ့ ခေတ်ပေါ်သင်္ကေတနဲ့ ပေါင်းစပ် ရေးသားပုံလေးပါ။
အဲ့ဒီလိုဘဲ တစ်ချို့ Speaker တွေက ‘used to’ question တွေနဲ့ negative တွေကို ‘do’ auxiliary မပါဘဲ ဆက်လက်ရေးသား ပြောဆိုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
Used you to like him? (Irish စာရေးဆရာ J. Johnson ရဲ့ ၁၉၇၇ ထုတ် ဝထ္ထုတိုမှ)
I used not to be so impressed with Bob Brookmeyer… (Amazon.co.uk online review March 2010 မှ)
အဲ့ဒီ အရေးအသား form တွေက Britain မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀၊ ၄၀ လောက်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း British Speaker တစ်ချို့က need ကို true modal verb အနေနဲ့ (semi-modal ဖြစ်တဲ့ ‘need to’ အစား) ဆက်လက် သုံးစွဲလျှက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
If she wants help, she needs only ask. (သူမ အကူအညီလိုရင် မေးလိုက်ရုံပဲလေ။)
You needn't come with me if you’d rather not. (မလိုက်ချင်ရင် လိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။)
Need I say more? (ထပ်ပြောဖို့လိုသေးလား!)
ဒီ old fashion modal ကို ဟိုပါးပါး ဒီပါးပါး သုံးရကြတုန်း ဆိုပေမဲ့ အမေရိကန် Speaker တွေကတော့ သုံးဖို့ လက်ရှောင်ကြပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက idioms တွေနဲ့ fixed expression တွေအကြောင်း ပြန်ပြောရရင်တော့ အဲ့ဒီ expression တွေမှာ ယနေ့ခေတ်မှာ လုံးဝ မေ့ပျောက်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ original meaning တွေ၊ ရှေးရှေးက စကားလုံးတွေ ပါဝင်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ တစ်ကယ့် literal sense မှာ ဘာကို ဆိုလိုကြတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိကြပေမဲ့ အခုခေတ် အသုံးတွေမှာ အားပါးတရ သုံးစွဲနေကြတုန်းပါဘဲ။ ဥပမာတွေကို အောက်မှာ သီးသန့် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းအကြောင်းနဲ့ ဇစ်မြစ်ကို etymological ရှုထောင့်ကနေ သိချင်ရင်တော့ စာဖတ်သူတို့ ကိုယ်တိုင် ဆက်လက် ရှာဖွေလေ့လာကြပေါ့နော်။
She succeeded by the dint of all the effect she invested.
She’ll be suitably rewarded for her work, as is meet and proper.
The vandals escaped scot-free.
As is his wont, he arrived 20 minutes after the meeting started.
He ran hither and thither, trying to serve all the customers.
Passengers are requested to tender the exact fare.
I didn't mean to eavesdrop, but I couldn't help hearing…
လှေခေတ်၊ မြင်းခေတ်တုန်းက ပေါ်ခဲ့ပုံရတဲ့ အချို့ကတော့
I gave himawide berth.
He says that more changes are in the offing.
There are no hard and fast rules for this.
Now that he’s got the bit between his teeth there is no stopping him.
If he is not careful, he is going to comeacropper.
She gave free rein to her imagination and producedagreat story.
ရက်ကန်းစင်ကနေ ပေါ်ပေါက်လာပုံရတဲ့ expression တစ်ခုကလည်း
In many respects, dialect and idiom are the wrap and weft of English literature, whether it be Coleridge’s and Wordsworth’s Lyrical Ballards or Thomas Hardy’s Wessex chronicles. (The Guardian, December 2009)
သေချာတာကတော့ စာဖတ်သူတို့ English native speaker တွေကို အခုခေတ်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ expression တွေရဲ့ တစ်ကယ့်မူလ အဓိပ္ပါယ်ကို သွားမေးကြည့်ရင် တော်တော်များများက “I'm sorry. ကျွန်တော် မသိပါဘူးခင်ဗျား” လို့ပြန်ဖြေကြမှာ မလွဲပါဘူး။
VOA Learn English ၊ Collins COBUILD English Usage နှင့် Collins COBUILD Dictionary စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားတှဟော အမွဲတမျး ပုံသေ ရှိမနကွေဘဲ ပွောငျးလဲနတေယျဆိုတဲ့ စကားဟာ မှနျပါတယျ။ ခတျေကို လိုကျပွီး စကားလုံးတှေ၊ အဓိပ်ပါယျတှဟော အဟောငျးတှေ ဖွဈသှားလိုကျ၊ ပြောကျကှယျသှားလိုကျ၊ အသဈတှပေျေါလာလိုကျနဲ့ သံသရာလညျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွဿနာက ဘယျစကားက အသဈ ဘယျစကားက အဟောငျး ဘယျစကားကတော့ သုံးလို့ရသေးတယျ၊ ဘယျစကားက လုံးဝသုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ ကြှနျတျောတို့ ဘယျလို သိနိုငျမလဲ။ Contemporary တှကေ ဘယျတော့ old fashion ဖွဈလာမလဲ၊ ဘယျတော့ out-dated ဆကျဖွဈသှားမလဲပေါ့။ တဈခါတဈလေ တဈစုံတဈယောကျက contemporary ထငျပွီးသုံးနတောကို အခွားတဈယောကျက old fashion လို့ ထငျတာ ကွုံဖူးကွားဖူး ကွမှာပါ။
စကားတှထေဲမှာ old fashion ဖွဈသလား၊ out-dated ဖွဈသလား ခှဲလို့ အလှယျဆုံးကတော့ slang နှငျ့ idiom တှေ ဖွဈပါတယျ။ ခတျေအလိုကျ ပျေါလာတဲ့ စကားတှဖွေဈလို့ date stamp လုပျထားသလို ဖွဈနပေါတယျ။ ခတျေမှီသေးလား ခတျေအောကျသှားပွီလား သိရလှယျပါတယျ။ ခတျေအောကျနတေဲ့ slang တှေ idiom တှကေို သုံးနရေငျလညျး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အသကျတှကေို တဈဖကျလူက အလှယျတဈကူ ခနျ့မှနျးနိုငျသှားမှာစိုးလို့ (TV တို့ internet တို့ကနေ တှရေ့ ကွားရတဲ့ ) ပိုပွီး သဈတဲ့၊ ပိုပွီး contemporary ဖွဈတဲ့expression တှကေို ကြှနျတျောတို့ ရှေးခယျြသုံးစှဲဖို့ အစဉျကွိုးစား ကွတယျ မဟုတျပါလား။ တဈခြိနျတညျးမှာဘဲ ဒီခတျေပျေါ အသုံးအနှုနျးတှဟော အခြိနျကာလ တဈခုမှာ ပျေါပွူလာ ဖွဈသလောကျ အခြိနျ အပွောငျးအလဲနဲ့ အတူ အရောငျလှငျ့ ခွောကျသှသှေ့ားတဲ့ သဈရှကျတဈရှကျလို ဖွဈသှားကွမှာကို ကြှနျတျောတို့ သိထားပါတယျ။ ဒီကနေ့ ကြှနျတျောတို့ ‘thinking outside the box’ တို့ pushing the envelope’ တို့ကို သုံးနပေမေဲ့ နောငျနှဈအနညျးငယျကရြငျ သုံးခငျြမှ သုံးတော့မှာနျော။
ဒါဆိုရငျ grammar နဲ့ vocabulary ကရော။ ပွီးခဲ့တဲ့ ခရဈစမတျတုနျးက မိသားစုတှေ အမအေိ့မျမှာ စုဝေးကွတုနျး ညီဖွဈသူကို သူ့အိမျမှာ wireless အလုပျကောငျးကောငျး လုပျသလားလို့ ကြှနျတျောမေးလိုကျတော့ ၊ အမကေ ကြှနျတေျာ့ မေးခှနျးကို ကွားပွီး ဘာဝငျပွောသလဲဆိုတော့ ၊ မငျးတို့ အဖိုးရဲ့ wireless တုနျးကလညျး သူ့အိမျမှာ ကောငျးကောငျးမိခဲ့တာ မဟုတျဖူးတဲ့။ ကြှနျတျောပွောတဲ့ wireless က ကြှနျတေျာ့ညီအိမျက wifi network ကို ပွောနတော ဖွဈပမေဲ့ အမဝေငျပွောတဲ့ wireless က အခုခတျေမှာ radio လို့ လူတှေ သိကွတဲ့ အရာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အချေါအဝျေါနာမညျတူ တဈခုကို ခတျေကို လိုကျပွီး သုံးစှဲတဲ့ ပစ်စညျးကို ပွောငျးလဲ ချေါဆိုကွတာလဲ မထူးဆနျးတော့တဲ့ widespread phenomenon တဈခု ဖွဈလာပါပွီ။ စကားလုံးက မသဘေဲ အသဈပျေါလာတဲ့ ပစ်စညျးကို နာမညျထပျပေး ချေါဆို လိုကျရုံဘဲပေါ့။ တဈခါတဈလမှောလညျး နောကျထပျ ပျေါထှကျလာတဲ့ ပစ်စညျးရဲ့ version ကိုလိုကျပွီး (အရငျ ရှိပွီး နာမညျနဲ့ version ကိုလညျး မပြောကျစလေိုသောကွောငျ့) အမြိုးအစား ခှဲခွားရအောငျ နောကျတိုးစကားလုံးထညျ့ပွီး rename လုပျကွတယျ။ ဥပမာ အရငျတုနျးက guitar ဆိုရငျ acoustic တဈမြိုးဘဲ ရှိခဲ့တာ။ ဒါကွောငျ့ ဂီတာ (guitar) လို့ တဈလုံးတညျး ချေါကွတယျ။ နောကျခတျေပွောငျးလာတော့ မျောဒယျအသဈတှေ ထပျပျေါလာတော့ လြှပျစဈဂီတာ (electric guitar) ရယျလို့ နာမညျတိုးလာတယျ။ အလားတူဘဲ TV တို့ radio တို့ မပျေါခငျက music ဆိုရငျ live ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ နာရီတှဆေိုလညျး လကျတံတှပေါတဲ့ analog တှဘေဲ ရှိခဲ့ပွီး မီးရထားဆိုတာလညျး ရနှေေးငှနေဲ့ မောငျးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ပစ်စညျးဟောငျးတှေ အတှကျ ယနခေ့တျေ နာမညျသဈ new-word-for-old-thing တှဖွေဈတဲ့ electric guitar, acoustic guitar, digital clock, live music, bullet train, steam train စတာတှေ ပျေါလာ ကွပါတယျ။ နာမညျဟောငျးတှကေို မှနျးမံလိုကျတာပေါ့။ အဲ့ဒီလို မှနျးမံလိုကျတဲ့ စကားလုံးတှကေို retronyms လို့ ချေါပါတယျ။
အခွားသော စကားလုံးတှကေတော့ အခြိနျကာလ ရှလြေ့ားလာသညျနှငျ့အမြှ မူလ အဓိပ်ပါယျအစား၊ နောကျအစားထိုး အဓိပ်ပါယျက နရောယူသှား ကွပါတယျ။ ဥပမာ - ကြှနျတျောပွောခဲ့တဲ့ wireless ဥပမာ လိုမြိုးပေါ့။ ဒီလိုမြိုး စကားလုံးတှကေို historical example တှနေဲ့ meaning တှပေါ ဖျေါပွတဲ့ dictionary တှေ (ဥပမာ Oxford English Dictionary လိုမြိုး) မှာ ရှာဖှေ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ယနေ့ သိထားတဲ့ စကားလုံး တျောတျောမြားမြားရဲ့ အဓိပ်ပါယျတှကေ ခတျေတဈခတျေ သို့မဟုတျ အသုံးတဈခုခု အတှကျလောကျသာ အပျေါယံ သိတာက မြားပွီး meaning အသဈတှကေ အမြားစု ဖွဈပါတယျ။ စာဖတျသူမြား English စကားလုံးတှရေဲ့ ဇဈမွဈကို စိတျဝငျစားရငျ လလေ့ာဖို့ website တဈခု ဖွဈတဲ့ www.worldwidewords.org ကို ညှနျးလိုကျပါတယျ။ စကားလုံး အသဈတဈလုံး ဖွဈပျေါလာပုံကို ရှငျးပွထားတဲ့ အဲ့ဒီ website ထဲက ကောကျနှုတျခကျြ တဈခုကို ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
နာမညျကြျော New Scientist ဆိုတဲ့ သိပ်ပံ ပညာရပျဆိုငျရာ ဂြာနယျထဲမှာ အသဈဖနျတီးထားတဲ့ uragnosia ဆိုတဲ့ စကားလုံး တဈလုံးကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီစကားလုံးကို Andrew Ross ဆိုသူက Alistair Beaven ဆိုသူ စာဖတျသူ တဈဦးက မေးမွနျးလာသညျ့ “ စကားလုံး တဈလုံးကို အပျေါယံ အဓိပ်ပါယျကိုသာသိပွီး စတငျပျေါပေါကျရာ မူလ ဇဈမွဈကို မသိတဲ့ သူ” ကို ဘယျလို ချေါပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ပွနျလညျ ဖွကွေားရငျး ဖနျတီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Andrew က အာဖဂနျနစ်စတနျက ကှနျပြူတာ ဗိုငျးရပျဈ(computer virus) ကိုသာသိပွီး ရောဂါနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ (biological virus) ကို မသိတဲ့ ဘာသာပွနျတဈယောကျ အကွောငျးကို ကိုးကားပွီး ဥပမာ ပေးကာ uragnosia ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးက origin လို့ အဓိပ်ပါယျရတဲ့ ur နှငျ့ ignorance လို့ အဓိပ်ပါယျရတဲ့ ဂရိစကား agnosia ၂ လုံးကို ပေါငျးစပျထားတာပါ။ ဒါဆိုရငျ uragnosia ဆိုတာက ignorance of origin ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ စကားလုံးပေါ့။
grammar ကလညျး ခတျေအလိုကျ ပွောငျးတတျတယျနျော။ ၁၉၆၄ ခုနှဈတုနျးက ယူကကေ The Honeycombs လို့ ချေါတဲ့ Pop အဖှဲ့ရဲ့သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ Have I the right to hold you? က အရမျးပေါကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအရှိနျနဲ့ (British) English Speaker တျောတျောမြားမြားဟာ Question နဲ့ Negative တှကေို ‘do’ မပါဘဲ main verb ဖွဈတဲ့ have နဲ့ဘဲ တိုကျရိုကျ ဖှဲ့ပွီး ပွောဆို ရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာတော့ အမြားစုက အဲ့ဒီလို မသုံးကွတော့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ old form တှဟော fixed expression အခြို့မှာ ဆကျလကျ တညျမွဲနကွေပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာ Question တှေ Negative တှကေို ‘do’ auxiliary သုံးပွီး ရေးသားကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အခြို့ phrases တှမှော old form တှကေို တှရေ့တတျပါတယျ။
Have you no shame? (ရှငျမရှကျတတျဘူးလား!)
၁၉၅၄ တုနျးက အမရေိကနျ နိုငျငံရေးသမား McCarthy ရဲ့ ကှနျမွူနဈ ဆနျ့ကငျြရေး မိနျ့ခှနျးထဲက ‘Have you got no sense of decency, sir?’ ဆိုတဲ့ စကားကလညျး လူသိမြားသှားပွီး အဲ့ဒီ old form က USA မှာလညျး အဲ့ဒီ ခတျေတဈဝိုကျမှာ တှငျကယျြခဲ့ပါတယျ။ အခုခတျေမှာလညျး blog တဈခုမှာ Have you no နဲ့ အသညျးပုံ (heart symbol) ပေါငျးထားတဲ့ မေးခှနျးတဈခုကို တှလေို့ကျရသေးတယျ။ Old form နဲ့ ခတျေပျေါသင်ျကတေနဲ့ ပေါငျးစပျ ရေးသားပုံလေးပါ။
အဲ့ဒီလိုဘဲ တဈခြို့ Speaker တှကေ ‘used to’ question တှနေဲ့ negative တှကေို ‘do’ auxiliary မပါဘဲ ဆကျလကျရေးသား ပွောဆိုကွတာ တှရေ့ပါတယျ။
Used you to like him? (Irish စာရေးဆရာ J. Johnson ရဲ့ ၁၉၇၇ ထုတျ ဝထ်ထုတိုမှ)
I used not to be so impressed with Bob Brookmeyer… (Amazon.co.uk online review March 2010 မှ)
အဲ့ဒီ အရေးအသား form တှကေ Britain မှာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ ၃၀၊ ၄၀ လောကျတုနျးက ခတျေစားခဲ့ပါတယျ။
အခုလညျး British Speaker တဈခြို့က need ကို true modal verb အနနေဲ့ (semi-modal ဖွဈတဲ့ ‘need to’ အစား) ဆကျလကျ သုံးစှဲလြှကျရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
If she wants help, she needs only ask. (သူမ အကူအညီလိုရငျ မေးလိုကျရုံပဲလေ။)
You needn't come with me if you’d rather not. (မလိုကျခငျြရငျ လိုကျဖို့မလိုပါဘူး။)
Need I say more? (ထပျပွောဖို့လိုသေးလား!)
ဒီ old fashion modal ကို ဟိုပါးပါး ဒီပါးပါး သုံးရကွတုနျး ဆိုပမေဲ့ အမရေိကနျ Speaker တှကေတော့ သုံးဖို့ လကျရှောငျကွပါတယျ။
အစောပိုငျးတုနျးက idioms တှနေဲ့ fixed expression တှအေကွောငျး ပွနျပွောရရငျတော့ အဲ့ဒီ expression တှမှော ယနခေ့တျေမှာ လုံးဝ မပြေ့ောကျသှားကွပွီဖွဈတဲ့ original meaning တှေ၊ ရှေးရှေးက စကားလုံးတှေ ပါဝငျကွပွီး သူတို့ရဲ့ တဈကယျ့ literal sense မှာ ဘာကို ဆိုလိုကွတာလဲဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ မသိကွပမေဲ့ အခုခတျေ အသုံးတှမှော အားပါးတရ သုံးစှဲနကွေတုနျးပါဘဲ။ ဥပမာတှကေို အောကျမှာ သီးသနျ့ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သမိုငျးအကွောငျးနဲ့ ဇဈမွဈကို etymological ရှုထောငျ့ကနေ သိခငျြရငျတော့ စာဖတျသူတို့ ကိုယျတိုငျ ဆကျလကျ ရှာဖှလေလေ့ာကွပေါ့နျော။
လှခေတျေ၊ မွငျးခတျေတုနျးက ပျေါခဲ့ပုံရတဲ့ အခြို့ကတော့
ရကျကနျးစငျကနေ ပျေါပေါကျလာပုံရတဲ့ expression တဈခုကလညျး
သခြောတာကတော့ စာဖတျသူတို့ English native speaker တှကေို အခုခတျေမှာ ဖျေါပွခဲ့တဲ့ expression တှရေဲ့ တဈကယျ့မူလ အဓိပ်ပါယျကို သှားမေးကွညျ့ရငျ တျောတျောမြားမြားက “I'm sorry. ကြှနျတျော မသိပါဘူးခငျဗြား” လို့ပွနျဖွကွေမှာ မလှဲပါဘူး။
VOA Learn English ၊ Collins COBUILD English Usage နှငျ့ Collins COBUILD Dictionary စာအုပျတို့မှ ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
စိတ်လက်လှုပ်ရှား expression များ
LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)
Permalink Reply by Ashin Parmaukkha on January 14, 2015 at 16:56
Permalink Reply by Nwe Zin Htay on January 14, 2015 at 18:23
Permalink Reply by ချစ်သူထံသို့ပေးစာများ on January 14, 2015 at 20:16
Permalink Reply by su myat on January 14, 2015 at 21:59
Permalink Reply by Hsu Thinzar Nyein on June 8, 2015 at 11:39
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 8:57
Permalink Reply by nyeinthetko on September 6, 2015 at 16:28
Permalink Reply by Richard Michael William on September 7, 2015 at 21:04